SAWIRO:-Booliska Puntland oo soo bandhigay waxyaabaha qarxa - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Booliska Puntland oo soo bandhigay waxyaabaha qarxa
SAWIRO:-Booliska Puntland oo soo bandhigay waxyaabaha qarxa
Howlgal ay sameeyeen Ciidamada Booliska Dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa ay kusoo saareen qaraxyo miino oo lagu Aasay bartamaha Magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari,sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliska Puntland.
Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari G/Sare Xuseen Cali Maxamud ayaa sheegayaan in Miinadaas ay cadawga Puntland doonayeen inay ku dhibateeyaan Shacabka,hayeeshee ay fashiliyeen,isla markaana ay kasoo saareen goobtii lagu Aasay.
Waxaa uu sheegay taliyaha in howlgallada laga fulinayo gudaha Magalada Boosaaso ay noqon doonaan kuwa isdaba-joog ah ilaa laga xaqiijinayo Amniga Guud ee magalada Boosaaso oo bilihii u dambeysay ahaa mid aan wanaagsaneyn.
Howlgalka ay siwadajirka ah Ciidamada Booliska iyo kuwa PSF-ta Puntland ay uga fuliyeen Magalada Boosaaso ugana soo saareen Miinooyinka ayaa kusoo aadaya xilli todobaadyo is xiga xiga ay ka dhaceen qaraxyo miinooyin ah.
Previous articleDHAGEYSO:- Warka Subax ee Radio Risaala 20-08-2019
Next articleDhageyso:-C/raxmaan C/Shakuur oo ka digay faragelinta doorashada Galmudug